AKHRISO:- Puntland oo Fariin kusaabsan Duulaanka lagu soo qaaday Sanaag udirtay DFS iyo Beesha Caalamka. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaAKHRISO:- Puntland oo Fariin kusaabsan Duulaanka lagu soo qaaday Sanaag udirtay DFS iyo Beesha Caalamka.
AKHRISO:- Puntland oo Fariin kusaabsan Duulaanka lagu soo qaaday Sanaag udirtay DFS iyo Beesha Caalamka.
February 26, 2020 marqaan Faalloyinka, Maqal Iyo Muuqaal, Somali News 4
Kenya oo sheegtay in tirada Macalimiinta lagu dilay Dalkeeda ay gaartay 42Macalin Muddo Shan sano ah.
Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
CAWAANTA IYO CAAMADU WAY ISKA RIYAAQAAN!
Sirta ku duugan shaxdan Sool, Sanaag iyo Cayn la dheelayo ayaan wax yar idiin ka bidhaaminayaa. Marka ugu horreeya shaxdani waa mid siyaasadda aad uga baxsan oo waxay salka ku haysaa danooyin gaar ahaaneed oo looga sii hordhacayo isbeddelka xooggan ee ay haatan gobollada woqooyiga ka hirgalinayaan Beesha Caalamka iyo Dowladda Federaalku. Maamul jabhadeedkii SNM iminka waa lagaga takhalusayaa oo waxaa dhawaan beddelaya oo la yagleelayaa maamul goboleed lagu baheeyay dhammaan beelaha gobollada Woqooyi Galbeed. Waxaa laga yaabaa in ay Soolta Woqooyi iyo Sanaagta Galbeed raacaan laakiin shaki baa ku jira.
Qawleysatada SNM oo uu damacii weynaa wali ka hayo macdanta iyo shidaalka Sool iyo Sanaag ku aasan ayaa waxay soo kiraysteen dabaqoodhiyo Dhulbahante iyo Warsangali ka dhashay oo iyagu ba dhuuniqaateyaal ahaa ee loo abtiyeeyay. Waxay isku gacan saarteen in ay siyaasadda gobolladan awood iyo saami weyn ku yeeshaan iyaga oo adeegsanaya maleeshiyo reereedka ay dabadhilifyadu ka dhasheen. Qorshahu waxuu yahay in ay deegaanadaas gacanta ku dhigaan si ay marka Soomaaliya waxsoosaarka kheyraadkaas rasmi loogu fasaxo ay qawleysatadan Isaaq iyo qawsaaradooda Harti saamiga ugu weyn ku yeeshaan ganacsiga ka dillaaci doona.
Waxaa na ka dambeeya oo raasimaalkaas u yaboohay shirkado iyo shakhsiyo shisheeye oo maalqabeenno ah – min Itoobiya ilaa Imaaraadka ilaa Yurub, Mareykan. iyo Shiinaha – oo dabada ka riixaya.
Kkkk dhabayaco waxay idinku dhaheen is difaacaa anaku sabab aan idiinku dhimano mahaynee..
Beesha calaamkay noosoo gurmo Isaaq baa soo socdeee!!
ISAAQU beel calaam uma joojiyo.
Maandhe anagu Isaaqa oo dhan jaa’ifeysan mayno laakiin qawleysatada sNM iyo qawsaarada naga dhashay ee u naageeya si kulul ayaynu ugu jihaadeynaa.
Cawaanta iyo caamada sidaada ee dhimirka la’ ayuun baa huuhaada iyo khayaalka lagu qiijiyo mingisku ugu soo degaa oo meel cidla ah ka burqada. Qosolka madhan iyo qaaddirada bartaa ka miis.